Calle 13 ၏အကောင်းဆုံးစာပိုဒ်များ ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
Calle 13 ၏အကောင်းဆုံးစကားစုများ
Calle 13 သည်သင်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပါသလား။ ၎င်းသည် Puerto Rican ၏မြို့ပြဂီတ၏ဂီတဆိုင်ရာနှစ်လုံးသည်မိထွေးပထွေးနှစ်ယောက်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သူတို့၏အမည်များမှာRenéPérez Joglar နှင့် Eduardo Cabra Martínezတို့ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်သူတို့၏အမည်ပြောင်များကြောင့်လူသိများသော်လည်း Resident နှင့် Visitor အမည်များသည်သင်နှင့်ပိုမိုရင်းနှီးရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ၄ င်းတို့ကို ၁၉၇၈ တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးRené၏မိခင်နှင့် Eduardo ၏ဖခင်တို့လက်ထပ်သောအခါပconိသန္ဓေယူခဲ့သည်။
သူ၏အမည်မှာ Calle 13 မှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ Renéနေထိုင်ခဲ့သည့်နေရာတွင် Eduardo သည်သူ့မိဘများနှင့်လက်ထပ်ခဲ့သော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်ကွာရှင်းခဲ့သည်။ သို့သော်သူတို့အနေဖြင့်အပြန်အလှန်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သောကြောင့်အဆက်အသွယ်ကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့လေ့လာပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့တေးဂီတကိုဝက်ဘ်ဆိုက်ကတဆင့်ပြသဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ တစ်နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးအယ်လ်ဘမ်ကိုထုတ်ဝေဖို့သူတို့ဆက်သွယ်ခဲ့ကြပေမယ့်သူတို့ဟာနိုင်ငံတကာမှာအသိအမှတ်ပြုခံရတဲ့ဒုတိယမြောက် single မတိုင်ခင်အထိပါဘဲ။ 2007 ခုနှစ်တွင်သူတို့ဒုတိယအယ်လ်ဘမ်ဖြန့်ချိ။
၎င်းတို့တွင်ကြွက်သားပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသည်။ သို့သော် ၂၀၀၈ နှင့် ၂၀၁၀ တွင်သူတို့၏တတိယနှင့်စတုတ္ထအယ်လ်ဘမ်များကိုထုတ်ဝေခဲ့ပြီးလက်တင်အမေရိကမှလူထုပုံပြင်များမှတစ်ဆင့်လူမှုရေးကတိကဝတ်များကိုပိုမိုအာရုံစိုက်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်သူတို့ကိုယ်ပိုင်စီမံကိန်းများပြုလုပ်ရန်အားလပ်ချိန်ကိုယူခဲ့သည်၊ သို့သော်သူ၏သီချင်းစာသားများသည်လူအများတို့၏နှလုံးသားကိုဆက်လက်အမှတ်ရနေသည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစကားစုစုစုပေါင်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်လူများစွာသည်အဘယ်ကြောင့်၎င်းတို့၏အဓိကဘာသာစကားများတွင်လူသိများရကြောင်းနားလည်စေလိမ့်မည်။ သူတို့၏သီချင်းစာသားများမှတစ်ဆင့်သူတို့၏ဂီတအမျိုးစုံရခြင်းနှင့်သရော်စာစာသားများကိုလူအများစု၏နှလုံးသားကိုထိရောက်စေရန်လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုဝေဖန်ခြင်းသည်သူတို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ထို့ထက်ကား၎င်းတို့သည်လက်တင်အမေရိက၏နိုင်ငံရေးနှင့်ကမ္ဘာတ ၀ ှမ်းရှိလက်ရှိအရေးကိစ္စများကိုအာရုံစိုက်ပြီးနိုင်ငံတကာနောက်လိုက်များပိုမိုရောက်ရှိရန်ဖြစ်သည်။ သူ့သီချင်းစာသားများကသင့်အတွက်အရာအားလုံးကိုလက်မလွတ်ပါစေနှင့်။
Calle 30 ၏သီချင်းများမှစာပိုဒ် ၃၀ ကိုသင်စဉ်းစားစေနိုင်သည်
ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုကျွန်တော်မယုံဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့အကြည့်ကိုငါယုံကြည်တယ်၊ ငါနိုးလာတဲ့အချိန်မှာမင်းဟာငါ့မျက်နှာပေါ်နေရောင်ခြည်၊ ငါပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဘဝပါ၊ မင်းဟာငါလိုအပ်တဲ့ဘဝပဲ။
ငါ့မှာအရာအားလုံးကိုတွက်ချက်ထားတာမရှိ၊ ငါ့ဘဝလည်းမဖြေရှင်းနိုင်သေးဘူး။ ငါပြုံးရုံလေးပဲပြန်လာမယ်မျှော်လင့်တယ်
စုစုပေါင်းအလုပ်ဖြစ်သော်လည်းဂုဏ်ယူစွာဖြင့်ဤနေရာတွင်မျှဝေသည်။ ကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်သည်။ ဒီမြို့ဟာ marullos တွေနဲ့မရေတွက်နိုင်ဘူး၊
လူများတိတ်ဆိတ်! ငါဆိုသည်ကား၊ ငါဆိုသည်ကား၊ မင်းနဲ့တူတဲ့ငါဟာမင်းနဲ့တူတာကြောင့်ငါခံစားရတာငါခံစားခဲ့ရတယ်
Atea, diabolical သို့မဟုတ်ကက်သလစ်, အရေးမပါ! ထိုသူအပေါင်းတို့သည် symphonic ကဲ့သို့တူညီသောအော်ဟစ်။
ဒီနေ့မင်းဟာငါ့ရည်းစားဖြစ်တော့မယ်၊ ငါတို့ claustrophobic မရောက်ခင်အထိတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ရိုက်နှက်ကြမယ်။
နံရံများကိုနံရံများမှုတ်ဆေးများဖြင့်လမ်းများပေါ်တွင်ပန်းချီကျွန်ုပ်၏အလံကိုမြှင့်ပြီးဖတ်သူတစ် ဦး တည်းနှင့်သာဖြန့်သည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုစတင်ပြောင်းလဲလာသည်။
အချက်တစ်ချက်ကိုသက်သေပြရန်ကျည်ဆန်များမလိုအပ်ပါ၊ သင်တစ် ဦး ကွယ်လွန်သူအားစကားမပြောနိုင်ပါ။
နှစ်များကုန်လွန်လေကျွန်ုပ်တွေးသောအခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆန့်ကျင်နေပါသည်။ အချိန်ကငါ့ကိုမလှုပ်ဘူး၊ ငါအချိန်နဲ့ရွှေ့တယ်။ ငါအသက်ရှင်နေထိုင်ရန်ဆန္ဒ, ပင်လယ်ဖြတ်ကျော်ပြီးနောက်အဘယ်အရာကိုသိရန်အလိုရှိ၏, ဖြတ်ကူးရန်ဆန္ဒရှိသည်။
ကျွန်ုပ်မှာနာရီမရှိဘူး၊ ပြက္ခဒိန်မရှိဘူး ငါအမူအကျင့်ကိုမယုံဘူး၊ အဘိဓာန်တွေကိုလည်းမယုံဘူး။
ပိုစတာများအကြောင်း၊ ဗာတီကန်တွင်နေထိုင်သောအကြီးဆုံးသောမာဖီးယားဂိုဏ်းများဖြစ်သော Sopranos အကြောင်းမပြောပါနှင့်။ လူများ၏လှည့်စားမှုကိုခံယူသောသူတို့၏လှည့်စားမှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောထင်မြင်ယူဆသူတိုင်းကိုသူတို့တင်ပေးသည်။
ငါဟာမင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးအနုပညာရှင်ဖြစ်ချင်တာလည်းမဟုတ်သလို Puerto Rico ကိုကိုယ်စားပြုဖို့လည်းစိတ်မ ၀ င်စားပါဘူး။ အားကစားသမားတွေရှိတယ်၊ ငါ့နိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုတယ်၊ ငါ့အရာကငါ့လျှာကိုလွှတ်လိုက်ပြီးလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုဆင်းလိုက်ဖို့ပါ။
မင်းသာယာတဲ့နေ့တစ်နေ့ရအောင်ငါမိုးတိမ်မှုတ်မယ် တယ်လီဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ပုံကိုလည်းကျွန်ုပ်သိသည်။ မင်းအတွက်မင်းအတွက်ငါနယ်နိမိတ်ကိုဗီဇာမရှိဘဲဖြတ်ကျော်ပြီး Mona Lisa ကိုပြုံးပြလိုက်သည်။
ငါအရာအားလုံးကိုဆန့်ကျင်သွားတယ်, ငါလေချွေးစေ။ ငါခြေလှမ်းတိုင်းကပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပြောပြ။ ကျွန်ုပ်၏အမြတ်ထုတ်မှုများကိုပင်အံ့အားသင့်မိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအရိပ်အဖြစ်ပြောင်းလိုက်သောကြောင့်သမိုင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုသရဲခြောက်နေသည်။
မိမိကိုယ်ကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ခြင်းမှမိမိအမှားများမှသင်ခန်းစာယူခဲ့သည်၊ အဘိုးအိုသည်တွင်းနက်ဖြစ်သည်။ သင်သည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအတူတူနေထိုင်သည့်အခါနေထိုင်ခြင်းသည်အလွန်လှပသည်မဟုတ် သူဟာကွဲပြားခြားနားချင်ပေမယ့်သူကိုယ်တိုင်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပြီးသူလုပ်တဲ့အချိန်ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်။
ဒီနေ့နေဟာပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးထွက်သွားပြီးမထွက်လာချင်ဘူး၊ နိုးလာတယ်၊ သေမှာကိုကြောက်နေတယ်။ မင်းရဲ့မျက်စိကိုဖွင့်လိုက်ပြီးနေကသူ့အံသွားကိုဖယ်လိုက်တယ်။
ယခုသင့်ဝတ်စုံ၊ စကတ်နှင့်ရှပ်အင်္ကျီကိုချွတ်လိုက်ပါ။ အဝတ်, အမှတ်တံဆိပ်, တံဆိပ်များကိုချွတ်ချွတ်။ ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲဖို့မင်းရဲ့ရဲစွမ်းသတ္တိကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ဆိုရင်ရိုးသားမှုမှာအဝတ်အစားမရှိဘူး။ မိတ်ကပ်လည်းမရှိဘူး။
အချိန်ကုန်မနေပေမယ့်အမှတ်တရတွေကတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ စက္ကန့်များကိုရေတွက်။ မရပါ။ သည်းခံခြင်းသည်ရိတ်သိမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ပြက္ခဒိန်တွင်ရက်စွဲမရှိပါ။
ကြယ်ပွင့်တစ်ပွင့်အပေါ်လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ပြီးပြည့်စုံသောရာသီဥတုနှင့်အတူခရီးတစ်ခု။ ငါ့ကိုလေပြေအရသာနဲ့ပြုံးပါ။
ထူးဆန်းတဲ့အသံဖြစ်ပေမယ့် Idiots တွေကိုနားထောင်ပြီးဘာမှမပြောတဲ့စမတ်ကျတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ငါစကားပြောတဲ့လူထုံကိုပိုနှစ်သက်တယ်။ သူပြောသမျှအရာအားလုံးဟာကောင်းသောအကြံအစည်ကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ရသည်။ ပညာရှိတစ် ဦး ကသူဟာတရားစီရင်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုသိုထားခဲ့သူဖြစ်သည်။
ပုရွက်ဆိတ်တွေကမင်းကိုလှည့်စားတယ်၊ သူတို့ဟာသေးသေးလေးပေမယ့် piranhas လိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အနေနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်။
မင်းအတွက်မင်းငါလုပ်သမျှအားလုံးကိုမင်းအတွက်လုပ်ပေးတယ် အဲဒါငါ့ရဲ့အကောင်းဆုံးကိုရတာပါပဲ ငါအလိုရှိသည်အတိုင်းငါဖြစ်၏။
အိုးကိုသတ်ပြီးမျက်နှာကိုမပြတဲ့သူတွေကသူဌေးကအမိန့်ပေးပြီးဆင်းရဲသားကရိုက်တယ်။ အချက်တစ်ချက်ကိုသက်သေပြရန်ကျည်ဆံများမလိုအပ်ပါ။ ဒါဟာကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်၊ သင်ဟာကွယ်လွန်သူကိုစကားမပြောနိုင်ပါဘူး။
မင်းရဲ့နားစည်ကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်မင်းရဲ့ဆံပင်တွေကိုလျှောက်လှမ်းချင်တယ်။ အနည်းငယ်နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာရွတ်ဆိုပြီးသင့်ကို Clam စာရွက်တစ်ခုပေးတယ်။
ငါဘယ်သူမှနားမလည်တဲ့လူ၊ လူမိုက်တွေရဲ့ရူးသွပ်တဲ့အသံ၊ လူကောင်းတွေ၊ မင်းနဲ့ငါပြောသမျှအရာအားလုံးဟာမနှစ်မြို့ဖွယ်၊ အသိဉာဏ်ရှိပြီး၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » Calle 13 ၏အကောင်းဆုံးစကားစုများ
သင်ယူမှုကိုသင်ကြားရန် Didactic နည်းဗျူဟာများ